Ingqondo, iya kuthi, intuition. Abaninzi bakholelwa ukuba ukuzithemba akuxakali phambi kwabaphulaphuli kwaye ungalokothi ulandele igama kwi-pocket yakho. Enyanisweni, isimo sokuzithemba "senziwe" ngongqondo, ngokwengqondo-ngokwemimiselo nangenemvelaphi. Ukuze uzive njengentlanzi emanzini nayiphi na imeko, kufuneka ube nenqanaba elaneleyo lobunzima, ukwazi ukulawula iimvakalelo zakho, izenzo kunye nokudibanisa ulwazi olukhoyo ngeemvakalelo, ezibizwa ngokuba yi-intuition. Kanti usoloko ubeka iinjongo, uye kuye ngaphandle kokwesaba ubunzima, kwaye unike abanye ithuba lokuzivakalisa, abangabagwebi okanye abagxeke.
Yintoni eyahlula abantu abanokuzithemba? Njengomthetho, baphumelele. Kwixesha elide sele sele igama elithi "ukuzithemba" kunye "nempumelelo" sele lifana. Abo bangashiyi umhlaba bephantsi kweenyawo phambi kweso-interlocutor, baxhamle, banamandla, bayazi indlela yokwenza oonxibelelwano kwaye bafeze oko kuqalwe ukuphela. Abantu abanjalo banako ukwabelana ngomsebenzi nokuphumla. Ukuba kufuneka usebenze kanzima, akukho ngcikivo kunye nokudakumba, okanye ukugula ixesha elide kunye neentaba zamacwecwe akuyi kuba ngumqobo. Kodwa xa ixesha lokuphumla liza, abanakho ukuzisola okuncinci baya kunqumla ifowuni yeselula baze baxhomeke kwi-idleness. Iiplani zokuphakama kokuzithemba kufuneka zifunwe ebuntwaneni. Kukho amaninzi amanqaku awenzayo.
Isikhathi sokubeleka kunye nokubeletha
Ngokweziseko zokungaqiniseki, ngokweengcali zeengqondo, ngumama wokwesaba umama ozayo. Uyabonakala ngaphambi kokuzalwa, kuba esesiswini, umntwana uyava ukuba ufuna ntoni kwaye ulindele. Ukuba umama ucinga ngokunika umntu omtsha kwihlabathi okanye ukukhipha isisu, umntwana okokuqala uvakalelwa kukuba lo mvakalelo ongathandekiyo kwaye mhlawumbi ukuba ebomini bokuba ngumntu omdala akayi kuba nethemba kubantu abakujikelezile.
Kuze kube kutshanje, ababelethisi bawabetha iintsana ezisanda kuzalwa kubapapa, ngoko baqala ukukhala baze baqalisa ukuphefumula. Kwenzeka ntoni? Umntwana wayelungiselela ukuzalwa kweenyanga ezili-9, ukukhangela, ukulwa nomsele wokuzalwa, kunye neyokuqala into eyenziwa yihlabathi. Ungamthemba njani kwaye uzive ekhuselekile? Kukulungile ukuba namhlanje inkundla enjalo ayiqhutywanga, - izazi zeengqondo zivuyayo.
Ubuchule bokuqala. Ubonakala ngathi? Ngaphandle kokumomotheka, awukwazi ukwenza ngaphandle kwayo: ngamanye amaxesha umntwana angapenda kunye noko wayidla isiqingatha semini edlulileyo. Bazali, musa ukumgxeka ngenxa yesenzo esinjalo sokuzibonakalisa kwaye musa ukuthi fu, kungenjalo ukususela kumncinane umntwana unokuqiniseka ukuba yonke into eyadalwa kwaye yaphunyezwa nguyena kwaye ibangela ukugwetywa.
Amanyathelo okuqala. Ukuba umntwana wakhweba ngexeshana kwaye wuleza wafunda ukuhamba ngokubonga ngabazali, mhlawumbi, ebomini, uya kuhamba ngokuzithemba. Uvakalelo lwenkxaso kunye nomhlaba onzulu ophantsi uya kuhlala naye. Ukuzola kunye nokuzithemba kwakho kwiqela elitsha, indlela yokungena kwigumbi ongaziwa kuxhomekeke ekubeni ngaba uvunyelwe ukuvula ii-lockers ebuntwaneni bakho kwaye ubeke "umyalelo" apho. Kuvela ukuba ukuvinjelwa kokufunyanwa kwee-horizons ezintsha kuhlala kumemori ngonaphakade.
Utitshala wokuqala . Ukwazisa umthengisi wokuqala kwihlabathi elitsha kuye, apho, ngandlela-thile, udlala indima yomama. Nguye onokugqibela ukutshabalalisa okanye, ngokuchaseneyo, ukuqinisa ukholo lwakho kumntwana wakho. Konke kuxhomekeke ekubeni ngaba iklasi iya kwahlulwa yabafundi abahle kakhulu kunye namasela emoyeni kwaye yiyiphi "i-caste" eya kuba ngumntwana.
... Ndifunda ngokuhamba
Ukuzithembela kusekelwe kwizinto zangaphakathi nangaphandle. Ookuqala uquka ulwazi, izakhono, amava, iimpawu zomntu, izinto ezithandwayo. Imoto ebiza, indlu enkulu yelizwe kunye nomfazi oyisibonelo kukunika umvakalelo wokuzithemba. Kuyathakazelisa ukuba abantu be-sanguine babonakala njengentembelo yangaphakathi-ngenxa yokujonga kakuhle kwehlabathi, kodwa abantu be-choleric banokuthi bangabi nantembelo. Kuye kwenzeka ukuba nangomfanekiso umntu angahlula abantu abanokuzithoba. Ngamnye wabo unemizimba yakhe, ubuso, ubuso, uhlobo lokuthetha, oludala oko kuthiwa yi-corset.
Inyathelo 1. Phuma ukwesaba. Indlela elula - ukuyibhala ephepheni, ukumomotheka nokutshisa-umlilo uyacima.
Inyathelo 2. Gcina idayari yokuphumelela, bhala ukuncinci kwakho okuncinci imihla ngemihla. Umzekelo: "Namhlanje ndathi akukho kwaye andizive ndinezono ngenxa yale nto." Ukugatya kuthetha ukuba ube nembono yakho.
Inyathelo 3. Sebenza ngeempendulo. Intando apho apho iyakunikhumbuza into ebalulekileyo, qinisa izimvo zakho kwaye uzakhele ukuzithemba.
Inyathelo 4. Yenza into oyithandayo, - ukuzonwabisa, ukuzonwabisa okulungileyo, ukunxibelelana nabahlobo. Uvuyo lweziphumo luya kukhuthaza ukuzithemba kuwe.
Inyathelo 5. Ukucwangcisa ngokufanelekileyo ubomi bakho. Kwimihla ngemihla ehleliweyo, kuphela ama-60% kuphela ayenziwa, ngoko kulungiswe ngokufanelekileyo kwaye wenze izigqibo ezifanelekileyo.
Inyathelo 6. Beka iinjongo ezifezekileyo, zithwale kwi-"I-already ine". Khumbula imeko yakho.
Inyathelo 7. Ukuthetha rhoqo rhoqo nabantu abanokuzithemba kwaye ufunde kuzo ukuzithethelela, ukuthintela, ukuthintela kunye nezinye iimpawu ongenalo.
Isinyathelo 8. Bhala imigaqo yokuziphatha neyokuziphatha kwiphepha. Isikhundla sakho ngumhlaba, uluvo lwakhe, ngaphandle kokuba kunzima ukucinga umntu othembekileyo.
Isinyathelo 9. Bhalisela izifundo zokufundisa, oku kuya kunceda ukuphelisa ukwesaba ukuthetha koluntu nabantu abatsha kwindawo.
Isinyathelo 10. Yenza umsebenzo olula imihla ngemizuzu embalwa: hlala nomqolo wakho kwiphandle (udongeni), cindezela emva kwentloko, iigxala, iindlovu. Oku kuya kubumba isithuba esifanelekileyo, uya kubonakala uphezulu, kwaye abantu abaphakamileyo baphathwa ngokuhlonipha.
Yintoni enokuyenza kwintsapho encinci, ukuba akukho zindlu
Njengoko sihlala ngoFebruwari 23, 2016: zonke iinkcukacha malunga nokudluliselwa kweeholide kunye neentsuku zokusebenza
Iinkcukacha zeemveliso zentlanzi
Indlela yokujongana nomoya ombi
Izityalo ezingaphakathi: i-gloxinia
Ukuthandana kwangempela ngeentengiso zephephandaba
Abahlobo bakaZhanna Friske bafuna ukudibanisa uDmitry Shepelev kunye nomculi wakhe
UKurban Omarov wabeka abalandeli baka Xenia Borodina kwiShaneli esisodwa